Noise glimpse about (1) – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီတဈခါတော့ သင်ျကွနျမတိုငျခငျမှာ [ When Does Sound Become Noise] ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ [Debate]
အစီအစဉျတဈခုနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အကွောငျးအရာလေးကို တငျပွပေးလိုပါတယျ။
ဒီအစီအစဉျဟာ အသံနဲ့ ဆူညံသံ
အကွောငျးကို ဆကျနှယျဆှေးနှေး ပွောဆိုကွတဲ့ အစီအစဉျဖွဈပါတယျ။ [Debate]ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝအရ
ပါဝငျပွောဆိုသူ တှေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခွအေတငျပွောကွတာတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့
ဒီအစီအစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး ကိုယျပွငျဆငျသှားခဲ့တဲ့အထဲက ပွောခှငျ့မရ ခဲ့အကွောငျးအခကျြတှေ၊ ပွောခဲ့သျောလညျး
အကွောငျးကွောငျ့းတှကွေောငျ့ ပွနျလညျ ထုတျလှငျ့တဲ့အခါမှာ မပါလာတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို တငျပွပေးသှားပါ့မယျ။
အသံနဲ့ ဆူညံသံ ဆိုတာ ဘယျလိုကှာခွားပါသလဲ?
အသံဆိုတာကတော့ တုနျခါမှုနဲ့အတူ၊ လထေု၊ ရထေု စတဲ့ ကွားခံမီဒီယာတှကေို ဖွတျသနျးပွီး ကြှနျတျောတို့ရဲ့
နားစညျကို ရိုကျခတျလာတဲ့အခါမှာ ကွားလိုကျရတဲ့ အာရုံချေါ ဆိုတာ ဖွဈပါတယျ။
[Sound]၊ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ လကျတငျစကားဖွဈတဲ့ [Sonus]၊ [Sonare] စတာတှနေဲ့ ဆကျနှယျပွီး
ဖွဈပျေါလာတယျဆိုပါတယျ။ ကိုယျကွားလိုကျရတဲ့အသံဟာ –
……………… စတာတှကေတော့ ဦးနှောကျနဲ့ ခြိတျဆကျပွီး ပုံဖျောလုပျဆောငျ သှားတာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလို တုံ့ပွနျလုပျဆောငျတဲ့အခါမှာ၊ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတှေ၊ အရငျရှိခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံတှေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျရညျ
ကိုယျသှေး၊ လကျတလောစိတျခံစားခကျြ အခွအေနေ၊ ပတျဝနျးကငျြအနအေထား၊ စတာတှအေပျေါမှာ မူတညျပွီး
လုပျဆောငျ သှားတတျကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ဆူညံသံဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ကတော့၊ လူတဈယောကျအနနေဲ့၊ ကိုယျ မကွားလိုတဲ့ အသံဟာ ဆူညံသံဖွဈတယျလို့
အလှယျကူဆုံးအဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုတတျကွ ပါတယျ။ တကယျ တော့၊ ဆူညံသံဆိုတဲ့အထဲမှာ-
ဆိုတဲ့ အခကျြအလကျ တှေ ပါဝငျနကွေပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိပျစကျမှု၊ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ပွောဆိုဆကျဆံမှု၊ နထေိုငျ မှု ဘဝအရညျအသှေး၊ စတာတှကေို
ထိခိုကျလာစတေဲ့အသံတှကေို ဆူညံသံရယျလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
[Noise] ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ၊ လှိုငျးမူး လှိုငျးတောကျတဲ့အနအေထား၊ စကျဆုပျရှံ့ ရှာဖှယျရာ အနအေထားရယျလို့
အဓိပ်ပါယျသကျရောကျတဲ့ လကျတငျဝေါဟာရ [Nausea]၊ နဲ့ဆကျနှယျပွီးဖွဈပျေါလာတယျဆိုပါတယျ။
အကွမျးဖဉျြးအနနေဲ့ပွောရရငျတော့၊ သဈရှကျတှေ လတေိုးတဲ့အသံ၊ လကျပတျနာရီ တဈလုံးရဲ့ စက်ကနျ့တနျလေး
သှားနတေဲ့အသံတှဟော[20-30 dB] ပတျဝနျးကငျြလောကျရှိ ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့တှေ စာကွညျ့တိုကျထဲမှာ
စကားတီးတိုးပွောဖွဈကွတဲ့အခါမှာ အဲဒီ စကားသံဟာ [40-dB] ပတျဝနျးကငျြလောကျရှိတတျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့
ပုံမှနျစကားပွော ဆိုကွတဲ့အခါမှာတော့၊ အသံတှဟော [60-dB] ပတျဝနျးကငျြလောကျရှိပါတယျ။ ရနျဖွဈကွတဲ့ အခါမှာ၊
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အျောဟဈပွောဆိုကွတဲ့အခါတှမှောတော့ ဒီထကျမက ကယျြလောငျလာမယျဆိုတာကတော့
အထှအေထူးရှငျးပွနဖေို့ လိုမယျမထငျပါဘူး။ ဒါတှေ ကတော့ ဆိတျငွိမျတဲ့နရောဒသေမြိုးတှမှော ရှိနတေတျတဲ့
ကားလမျးတှပေျေါကယာဉျအသှားအလာတှကွေောငျ့ဖွဈပျေါလာတဲ့အသံတှကေတော့ [80-dB] ပတျဝနျးကငျြလောကျမှာ
ရှိတတျကွပါတယျ။ အဲဒီအထဲမှာ အသံပိုဆူညံအောငျ တမငျလုပျဆောငျထားတဲ့ ဟှနျးသံတှေ၊ မလိုအပျဘဲ အဆကျမပွတျတီးနေ
တဲ့ဟှနျးသံတှေ၊ အသံကယျြလောငျအောငျ လုပျထားတဲ့ အိပျဇောပိုကျတှကေနထှေကျလာတဲ့အသံတှဟော အသံဆူညံမှု
အခုခတျေရဲ့ ခတျေရစေီးကွောငျးအနအေထားကိုကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ လူငယျ တျော တျောမြားမြားဟာ လကျကိုငျဖုနျးကိုယျစီ၊
နားကွပျကိုယျစီနဲ့ နှဈသကျရာသီခငျြး နာထောငျကွ ရငျး သှားလာနတေတျကွတာကို တှကွေ့ရမှာပါဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့
တဈခါတဈရံ မှာ ကိုယျ့အနီးအနားက ဖွတျသှားတဲ့ လူငယျလေးတှရေဲ့ နားထဲရောကျနတေဲ့ နားကွပျထဲက တေးသှားကို
ကွားလိုကျရတတျတာမြိုးတှေ ကွုံဖူးပါတယျ။ သူတဈပါးနားထဲကမှာရှိတဲ့ နားကွပျထဲက အသံကို ဘေးနားကဖွတျသှား
ဖွတျလာလူတဈယောကျကကွားလိုကျရတယျ ဆိုရငျ ဒီအသံရဲ့ကယျြလောငျမှုကို မှနျးဆနိုငျပါတယျ။ အကွမျးဖဉျြးအနနေဲ့
ကတော့ အခုလို နားကွပျတှတေပျပွီးနားထောငျကွတဲ့အခါမှာ အသံတှဟော [100 dB] လောကျရှိတတျ ပါတယျ။ သီခငျြးသံ
ကယျြကယျြလောငျလောငျနားထောငျတယျဆိုရငျတော့ အခွအေနဟော ပိုဆိုးသှားပါလိမျ့မယျ။ အသံခြဲ့စကျတှကေနတေဈဆငျ့
ထှကျပျေါလာတဲ့ ပတျဝနျးကငျြနားမခံ သာနိုငျအောငျ ကယျြလောငျတဲ့ မြိုးစုံသော အသံတှရေဲ့အနအေထားက ပိုပွီးရိုကျခငျြးပွငျး တတျပါတယျ။
ဒီအသံတှထေကျ ပုမိုကယျြလောငျလှနျးလှတဲ့အသံတှကေတော့ လမျး တံတားတှေ ဖောကျတဲ့အခါမှာ လှနျတူးစကျတှကေနပေျေါ
ထှကျလာတဲ့အသံတှေ၊ လကျနကျခဲယမျးတှေ၊ တောငျတှကေို မိုငျးခှဲတဲ့အခါပျေါထှကျလာတဲ့ အသံတှေ၊ လယောဉျပြံ ပြံတတျတဲ့အသံတှေ
စတာမြိုးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ပမျြးမြှခွငျးအားဖွငျ့ အဲဒီအသံတှဟော [120- 140 dB] ပတျဝနျး ကငျြလောကျရှိတတျကွပါတယျ။
အသံတှကေို ကွားလာရတဲ့အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ အနညျးအကဉျြးတငျပွပေးလိုပါ တယျ။ ကြှနျတျောတို့ ပတျဝနျးကငျြ
ကနထှေကျပျေါလာတဲ့ အသံတှဟော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နားစညျမွှေးကို ရိုကျခတျလာပါတယျ။ အဲဒီရိုကျခတျမှုတှဟော၊
နားစညျးအမွှေးအနောကျ ဖကျမှာရှိနကွေတဲ့ ခြိတျဆကျကှငျးကိရိယာငယျလေးတှေ၊ အာရုံကွောတှကေနတေဈဆငျ့
ဦးနှောကျအတှငျးက အကွားအာရုံကို လကျခံပုံဖျောပေးတဲ့ နရောတှကေို ပုံပွောငျးလကျ ဆငျ့ကမျးရောကျလာပွီးတဲ့နောကျမှာ
ကွားသိမှုဆိုတာဖွဈပျေါလာပါတယျ။ ဦးနှောကျအတှငျး မှာ အကွားအာရုံခံစနဈနဲ့ ခြိတျဆကျထားတဲ့ အခွားသော နရောတှေ
အမြားကွီးရှိနပေါသေး တယျ။ ဒါတှအေားလုံး ခြိတျဆကျနှယျယှကျပွီးတော့၊ အစောပိုငျးမှာ တငျပွပေးခဲ့သလို
– အသံကွားခွငျး၊ မကွားခွငျး
– အသံ အနျိ့မျ့အမွငျ့ အတိုးအကယျြ
– အသံနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အကှာအဝေး
– အသံရဲ့ ဆိုလိုတဲ့အဓိပ်ပါယျ
– ဒီအသံဟာ ကိုယျ့အတှကျ ဘယျလိုအဓိပ်ပါယျရှိတယျ၊ ဘယျလိုအကြိုး သကျရောကျနိုငျတယျ
– ဒီအသံနဲ့ ပတျသကျလို့ ကိုယျက ဘယျလိုတုံ့ပွနျလုပျဆောငျမှာလဲ
……… စတဲ့ နောကျဆကျတှဲ လုပျဆောငျခကျြတှေ ဖွဈပျေါလာတတျပါတယျ။
အကွားအာရုံနဲ့ ပတျသကျလို့ ဦးနှောကျအတှငျးမှာ ပုံဖျောလုပျဆောငျရတဲ့ ဖွဈစဉျတှေ အမြားကွီးရှိပါသေးတယျ။
အဲဒီအထဲမှာ၊ကျိုယျနားထောငျလိုတဲ့အသံကိုပဲ ပိုပွီးသတိပွု နားထောငျနိုငျစှမျးရှိတာလညျး ပါဝငျပါတယျ။ အသံဗလံတှေ
ဆူညံနတေဲ့ ခနျးမတဈခုထဲ မှာ စကားပွောနကွေတဲ့အခါမှာ ဘေးပတျဝနျးကငျြက အခွားသောအသံတှကွေားထဲက
ကိုယျပွောဆိုနတေဲ့အကွောငျးအရာတှကေိုပဲ စူးစိုကျနားထောငျနိုငျတာ၊ ကွားနိုငျတာမြိုး တှေ ကိုယျတိုငျကွုံတှဖေူ့းကွပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုအနအေထားမြိုးဟာ အကွားအာရုံ ကောငျးတဲ့သူတှေ၊ ငယျရှယျတဲ့သူတှမှော ပိုပွီးတော့ တှရေ့တတျပါတယျ။
အသကျ အရှယျရလာတဲ့သူတှေ၊ အကွားအာရုံထိခိုကျတဲ့သူတှမှောတော့ ဒီလိုအနအေထားမြိုး မတှရေ့တတျနိုငျပါဘူး။
အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျးနညျးပါးတဲ့အခွအေနတှေေ၊ အခွားသော အသံတှေ ဆူညံလှနျလှတဲ့ အခွအေနတှေမှောလညျး အခုလို
ခှဲခွားနားထောငျနိုငျစှမျး ဟာ လြော့ပါးသှားတတျကွပါတယျ။
တဈခါတဈရံမှာ အသံတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ရုတျခွညျးတုံ့ပွနျဆောငျရှကျမှုတှေ လညျး ဖွဈပျေါလာတတျကွပါတယျ။
ဥပမာ၊ ရုတျတရကျ အသံကယျြကယျြလောငျ လောငျ ကွားလိုကျရတဲ့အခါလနျ့သှားတတျကွတာ၊ အျောဟဈလိုကျမိတာ၊
အကာ အကှယျယူဖို့ လုပျဆောငျတတျမိတာမြိုးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆူညံသံတှကေ ကြှနျတျောတို့ကို ဘယျလိုထိခိုကျမှုတှေ ဖွဈလာစနေိုငျပါသလဲ?
– အသံတှနေဲ့ ပတျသကျလို့အကဲဆပျတတျမှု
– ဆူညံသံတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ ခံနိုငျစှမျးရညျ
စတာတှဟော လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကှာခွားတတျကွပါတယျ။
ဥပမာ အနနေဲ့၊ ဆူညံကယျြလောငျတဲ့အသံကို နားယဉျပွီး ခံနိုငျရညျရှိတတျပမေဲ့၊ အသံတိုးတိုးလေးကို စဉျဆကျမပွတျကွား
နရေတဲ့ အနအေထားကို မနှဈသကျတတျတာ၊ စိတျညဈညူးတာမြိုးတှေ ခံစားကွရတတျတဲ့သူမြိုးတှကေို ကွုံတှဖေူ့းကွမယျ ထငျပါတယျ။
ဆူညံသံကို သညျးခံနိုငျတဲ့ အတိုငျးအတာဟာ၊ လူတဈယောကျတညျးမှာလညျး အမြိုးမြိုးသော အခွအေနတှေအေပျေါမှာ
မူတညျပွီး တဈခြိနျနဲ့တဈခြိနျ၊ ခံနိုငျစှမျးရညျ ကှာခွား သှားနိုငျကွပါသေးတယျ။ ဆူညံသံကို ဘယျလောကျပဲ ခံနိုငျရညျရှိ
တယျပွောပွော၊ ဆူညံသံရဲ့ ရိုကျခတျမှုတှကေို ကြှနျတျောတို့အနညျးနဲ့အမြားဆိုသလို ခံစားကွရတတျပါတယျ။
ဆူညံသံတှဟော ကြှနျတျောတို့အပျေါမှာ ဘယျလိုအကြိုးသကျမှုတှေ ဖွဈပျေါလာစေ တတျပါသလဲ?
ခုနကတငျပွပေးခဲ့သလို ဆူညံသံတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခံနိုငျစှမျးရညျတှေ ကှာခွား
တတျကွတယျဆိုပမေယျ့၊ ဆူညံသံတှရေဲ့ ရိုကျခတျမှုဟာ ကြှနျတျောတို့အပျေါမှာ အနညျးနဲ့ အမြားဆိုသလို
[Noise Pollution] လို့ ချေါဆိုတတျကွတဲ့ ဆူညံသံညဈညမျးမှုအပေါငျးက ကငျးဝေး ငွိမျးခမျြးနိုငျကွပါစေ။
အမှနျတရားနဲ့ လိပျပွာသနျ့ရှငျး ရိုးစငျးတဲ့ ဘဝကို မွတျနိုးထား ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
ဒီတစ်ခါတော့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်မှာ [ When Does Sound Become Noise] ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ [Debate]
အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို တင်ပြပေးလိုပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ဟာ အသံနဲ့ ဆူညံသံ
အကြောင်းကို ဆက်နွှယ်ဆွေးနွေး ပြောဆိုကြတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ [Debate]ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝအရ
ပါဝင်ပြောဆိုသူ တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အခြေအတင်ပြောကြတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့
ဒီအစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ပြင်ဆင်သွားခဲ့တဲ့အထဲက ပြောခွင့်မရ ခဲ့အကြောင်းအချက်တွေ၊ ပြောခဲ့သော်လည်း
အကြောင်းကြောင့်းတွေကြောင့် ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာ မပါလာတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
အသံနဲ့ ဆူညံသံ ဆိုတာ ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ?
အသံဆိုတာကတော့ တုန်ခါမှုနဲ့အတူ၊ လေထု၊ ရေထု စတဲ့ ကြားခံမီဒီယာတွေကို ဖြတ်သန်းပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့
နားစည်ကို ရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာ ကြားလိုက်ရတဲ့ အာရုံခေါ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
[Sound]၊ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ လက်တင်စကားဖြစ်တဲ့ [Sonus]၊ [Sonare] စတာတွေနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီး
ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ကြားလိုက်ရတဲ့အသံဟာ –
……………… စတာတွေကတော့ ဦးနှောက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပုံဖော်လုပ်ဆောင် သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ အရင်ရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်
ကိုယ်သွေး၊ လက်တလောစိတ်ခံစားချက် အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား၊ စတာတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး
လုပ်ဆောင် သွားတတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူညံသံဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့၊ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ ကိုယ် မကြားလိုတဲ့ အသံဟာ ဆူညံသံဖြစ်တယ်လို့
အလွယ်ကူဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတတ်ကြ ပါတယ်။ တကယ် တော့၊ ဆူညံသံဆိုတဲ့အထဲမှာ-
ဆိုတဲ့ အချက်အလက် တွေ ပါဝင်နေကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်စက်မှု၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြောဆိုဆက်ဆံမှု၊ နေထိုင် မှု ဘဝအရည်အသွေး၊ စတာတွေကို
ထိခိုက်လာစေတဲ့အသံတွေကို ဆူညံသံရယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
[Noise] ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ၊ လှိုင်းမူး လှိုင်းတောက်တဲ့အနေအထား၊ စက်ဆုပ်ရွံ့ ရှာဖွယ်ရာ အနေအထားရယ်လို့
အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်တဲ့ လက်တင်ဝေါဟာရ [Nausea]၊ နဲ့ဆက်နွှယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပါတယ်။
အကြမ်းဖျဉ်းအနေနဲ့ပြောရရင်တော့၊ သစ်ရွက်တွေ လေတိုးတဲ့အသံ၊ လက်ပတ်နာရီ တစ်လုံးရဲ့ စက္ကန့်တန်လေး
သွားနေတဲ့အသံတွေဟာ[20-30 dB] ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ
စကားတီးတိုးပြောဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ အဲဒီ စကားသံဟာ [40-dB] ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့
ပုံမှန်စကားပြော ဆိုကြတဲ့အခါမှာတော့၊ အသံတွေဟာ [60-dB] ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ အခါမှာ၊
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အော်ဟစ်ပြောဆိုကြတဲ့အခါတွေမှာတော့ ဒီထက်မက ကျယ်လောင်လာမယ်ဆိုတာကတော့
အထွေအထူးရှင်းပြနေဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါတွေ ကတော့ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဒေသမျိုးတွေမှာ ရှိနေတတ်တဲ့
ကားလမ်းတွေပေါ်ကယာဉ်အသွားအလာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသံတွေကတော့ [80-dB] ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ
ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အသံပိုဆူညံအောင် တမင်လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဟွန်းသံတွေ၊ မလိုအပ်ဘဲ အဆက်မပြတ်တီးနေ
တဲ့ဟွန်းသံတွေ၊ အသံကျယ်လောင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ အိပ်ဇောပိုက်တွေကနေထွက်လာတဲ့အသံတွေဟာ အသံဆူညံမှု
အခုခေတ်ရဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအနေအထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူငယ် တော် တော်များများဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုယ်စီ၊
နားကြပ်ကိုယ်စီနဲ့ နှစ်သက်ရာသီချင်း နာထောင်ကြ ရင်း သွားလာနေတတ်ကြတာကို တွေ့ကြရမှာပါဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့
တစ်ခါတစ်ရံ မှာ ကိုယ့်အနီးအနားက ဖြတ်သွားတဲ့ လူငယ်လေးတွေရဲ့ နားထဲရောက်နေတဲ့ နားကြပ်ထဲက တေးသွားကို
ကြားလိုက်ရတတ်တာမျိုးတွေ ကြုံဖူးပါတယ်။ သူတစ်ပါးနားထဲကမှာရှိတဲ့ နားကြပ်ထဲက အသံကို ဘေးနားကဖြတ်သွား
ဖြတ်လာလူတစ်ယောက်ကကြားလိုက်ရတယ် ဆိုရင် ဒီအသံရဲ့ကျယ်လောင်မှုကို မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းအနေနဲ့
ကတော့ အခုလို နားကြပ်တွေတပ်ပြီးနားထောင်ကြတဲ့အခါမှာ အသံတွေဟာ [100 dB] လောက်ရှိတတ် ပါတယ်။ သီချင်းသံ
ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နားထောင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခြေအနေဟာ ပိုဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ အသံချဲ့စက်တွေကနေတစ်ဆင့်
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နားမခံ သာနိုင်အောင် ကျယ်လောင်တဲ့ မျိုးစုံသော အသံတွေရဲ့အနေအထားက ပိုပြီးရိုက်ချင်းပြင်း တတ်ပါတယ်။
ဒီအသံတွေထက် ပုမိုကျယ်လောင်လွန်းလှတဲ့အသံတွေကတော့ လမ်း တံတားတွေ ဖောက်တဲ့အခါမှာ လွန်တူးစက်တွေကနေပေါ်
ထွက်လာတဲ့အသံတွေ၊ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ၊ တောင်တွေကို မိုင်းခွဲတဲ့အခါပေါ်ထွက်လာတဲ့ အသံတွေ၊ လေယာဉ်ပျံ ပျံတတ်တဲ့အသံတွေ
စတာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် အဲဒီအသံတွေဟာ [120- 140 dB] ပတ်ဝန်း ကျင်လောက်ရှိတတ်ကြပါတယ်။
အသံတွေကို ကြားလာရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနည်းအကျဉ်းတင်ပြပေးလိုပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်
ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ အသံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နားစည်မြှေးကို ရိုက်ခတ်လာပါတယ်။ အဲဒီရိုက်ခတ်မှုတွေဟာ၊
နားစည်းအမြှေးအနောက် ဖက်မှာရှိနေကြတဲ့ ချိတ်ဆက်ကွင်းကိရိယာငယ်လေးတွေ၊ အာရုံကြောတွေကနေတစ်ဆင့်
ဦးနှောက်အတွင်းက အကြားအာရုံကို လက်ခံပုံဖော်ပေးတဲ့ နေရာတွေကို ပုံပြောင်းလက် ဆင့်ကမ်းရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ
ကြားသိမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်း မှာ အကြားအာရုံခံစနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အခြားသော နေရာတွေ
အများကြီးရှိနေပါသေး တယ်။ ဒါတွေအားလုံး ချိတ်ဆက်နွှယ်ယှက်ပြီးတော့၊ အစောပိုင်းမှာ တင်ပြပေးခဲ့သလို
– အသံကြားခြင်း၊ မကြားခြင်း
– အသံ အနိ့်မ့်အမြင့် အတိုးအကျယ်
– အသံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကွာအဝေး
– အသံရဲ့ ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်
– ဒီအသံဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်၊ ဘယ်လိုအကျိုး သက်ရောက်နိုင်တယ်
– ဒီအသံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်မှာလဲ
……… စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
အကြားအာရုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ ပုံဖော်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ၊ကို်ယ်နားထောင်လိုတဲ့အသံကိုပဲ ပိုပြီးသတိပြု နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အသံဗလံတွေ
ဆူညံနေတဲ့ ခန်းမတစ်ခုထဲ မှာ စကားပြောနေကြတဲ့အခါမှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အခြားသောအသံတွေကြားထဲက
ကိုယ်ပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ စူးစိုက်နားထောင်နိုင်တာ၊ ကြားနိုင်တာမျိုး တွေ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုအနေအထားမျိုးဟာ အကြားအာရုံ ကောင်းတဲ့သူတွေ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေမှာ ပိုပြီးတော့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အသက် အရွယ်ရလာတဲ့သူတွေ၊ အကြားအာရုံထိခိုက်တဲ့သူတွေမှာတော့ ဒီလိုအနေအထားမျိုး မတွေ့ရတတ်နိုင်ပါဘူး။
အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနည်းပါးတဲ့အခြေအနေတွေ၊ အခြားသော အသံတွေ ဆူညံလွန်လှတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း အခုလို
ခွဲခြားနားထောင်နိုင်စွမ်း ဟာ လျော့ပါးသွားတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အသံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရုတ်ခြည်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေ လည်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ၊ ရုတ်တရက် အသံကျယ်ကျယ်လောင် လောင် ကြားလိုက်ရတဲ့အခါလန့်သွားတတ်ကြတာ၊ အော်ဟစ်လိုက်မိတာ၊
အကာ အကွယ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင်တတ်မိတာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူညံသံတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသလဲ?
– အသံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့အကဲဆပ်တတ်မှု
– ဆူညံသံတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံနိုင်စွမ်းရည်
စတာတွေဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွာခြားတတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့၊ ဆူညံကျယ်လောင်တဲ့အသံကို နားယဉ်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိတတ်ပေမဲ့၊ အသံတိုးတိုးလေးကို စဉ်ဆက်မပြတ်ကြား
နေရတဲ့ အနေအထားကို မနှစ်သက်တတ်တာ၊ စိတ်ညစ်ညူးတာမျိုးတွေ ခံစားကြရတတ်တဲ့သူမျိုးတွေကို ကြုံတွေ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ဆူညံသံကို သည်းခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာဟာ၊ လူတစ်ယောက်တည်းမှာလည်း အမျိုးမျိုးသော အခြေအနေတွေအပေါ်မှာ
မူတည်ပြီး တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်၊ ခံနိုင်စွမ်းရည် ကွာခြား သွားနိုင်ကြပါသေးတယ်။ ဆူညံသံကို ဘယ်လောက်ပဲ ခံနိုင်ရည်ရှိ
တယ်ပြောပြော၊ ဆူညံသံရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။
ဆူညံသံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေ တတ်ပါသလဲ?
ခုနကတင်ပြပေးခဲ့သလို ဆူညံသံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခံနိုင်စွမ်းရည်တွေ ကွာခြား
တတ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့်၊ ဆူညံသံတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို
[Noise Pollution] လို့ ခေါ်ဆိုတတ်ကြတဲ့ ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုအပေါင်းက ကင်းဝေး ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါစေ။
အမှန်တရားနဲ့ လိပ်ပြာသန့်ရှင်း ရိုးစင်းတဲ့ ဘဝကို မြတ်နိုးထား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။